Na-enye Egwuregwu Iju Mmiri, 50 Watt Led Iju Mmiri n'èzí, N'elu n'Ọdọ Mmiri Iju Mmiri si China emepụta
Nkọwa:Egwuregwu Iju Mmiri,50 Watt ekpuchire Iju Mmiri N'èzí,Mmiri Iju Mmiri n'èzí,Mmiri Iju Mmiri,,
Home > Ngwaahịa > Iju Mmiri Iju Mmiri > 50 Watt ekpuchire Iju Mmiri N&#39;èzí
Ngwaahịa nke 50 Watt ekpuchire Iju Mmiri N'èzí , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Egwuregwu Iju Mmiri , 50 Watt ekpuchire Iju Mmiri N'èzí suppliers / factory, wholesale high-quality products of Mmiri Iju Mmiri n'èzí R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
IP65 20W 30W 50W Ìhè anwụchịrị ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
IP66 Led Ìhè Mmiri 50W 65W 70W  Kpọtụrụ ugbu a
IP65 Led Iju mmiri Ìhè 40W 50W 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Led Wall Flood Light Lightmable 60W 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Ihu Igwe Ọdụdọ nke 60W 65W  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwurugwu Ngwurugwu Led Ling Light Knuckle Mount 60W  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Ihu Igwe Ọdụdọ nke 50 Watt 60Watt 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Light Watt 70 Watt 80 Watt 5000k  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Ìhè nke Ọwụwa Anyanwụ Ruo 70W 75W 80W  Kpọtụrụ ugbu a
ETL Led Light Light Parts 50W 60 Watt  Kpọtụrụ ugbu a
Pesdị Housinglọ Egwuregwu Iju Mmiri nke 50W 6000LM  Kpọtụrụ ugbu a
Bulbs ngbanwe ọkụ ọkụ mmiri 50W 6000LM  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Light Led 50W 6000LM 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
60W Mmiri Iju Mmiri nke Azụmahịa 12V  Kpọtụrụ ugbu a
50W Mpụga nke Mmiri Ìhè Mmiri  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Ihu ọkụ anyị 50w nwere ike ịmịpụta ihe ruru 6000lm. Ìhè Ìhè nke A Nke 30w bụ ndị nnọchi ntụgharị zuru oke maka 100W halogen bọlbụ. Ìhè ae nwetara n'okwute ọkụ nke 20w nwere mgbanaka igwe anaghị arụ ọrụ, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi,...
Light Light Lw Light 50w Ip66 anyị nwere ike iwepụta ihe ruru 6000lm. Iju mmiri nke Ledia 65w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Lightps Led Flus Light 70w nwere eriri igwe anaghị agbazi, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, can nwere...
Iju mmiri anyị nke Led 50ed nwere ike ịmịpụta ihe ruru 6000lm. Ìhè Igwe Ọkụ A Ledere 40 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Light lightww 50w Ip65 a nke nwere ihe ngbanwo igwe eji emeghari , nke kwụsiri ike ma nwekwaa ntukwasi obi,...
Ìhè Ìhè nke Anyị Led Wall nwere ike ịmịpụta ruo ihe dị ka 7200lm. Nke A Chetara Iju Mmiri bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Nke a mere ka Iju Mmiri Home ebusa na a mgbanwe metal mgbodo, ọzọ mụ na a pụrụ ịdabere, Ị nwere ike mfe wụnye...
Ìhè Ihu ọkụ Anyị nke Led na-enwu enwu nwere ike ịmị ọkụ ruo ihe dị ka 7200lm. Nke a Ugwu Iri Ledaa 65 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Igwe ọkụ nke 65w a nwere mgbanaka nwere igwe eji arụ ọrụ, nke kwụsiri ike ma bụrụ onye a...
Ngwurugwu Igwe Ighachị Anyị nke Led 60ed nwere ike ime ka ihe dị ọwụwa ruo 7200lm. Ezigbo Iju Mmiri loodlọ a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ugwu a na-efegharị nke na-efegharị efegharị nke nwere eriri igwe nwere nkwụsi ike, nke...
Ìhè Ihu Igwe anyị nke 50 Watt nwere ike ịmị ọkụ ruo 6000lm. Ìhè Igwe ọkụ a 60w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Rọpụtara Ọdịmma Anyanwụ nke 50 nke a nwere eriri igwe, nke kwụsiri ike ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya, can nwere...
Igwe ọkụ mmiri nke Watt 70 anyị nwere ike ịnwe ọmarịcha 8400lm. Ìhè Igwe Ọdụdọ A Nwere Ruo 80 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ. Ọkụ a na-enwu n'iche ọkụ nke 70w nwere eriri igwe anaghị agbazi, nke kwụsiri ike ma nwee...
Ìhè Ihu Igwe Ọdụdọ anyị 70w nwere ike ịmịpụta ọganiihu dị 80000m. Ìhè Igwe ọkụ a nke Ledan 75w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ na ya. Nke a na-enwu n'ichekwa Ìhè 80w nwere eriri igwe na-agbanwe agbanwe, nke kwụsiri ike ma...
Ìhè Ihu mmiri anyị 50w nwere ike ịmịpụta ihe ruru 6000lm. Ìhè Igwe Ọkụ A Ledere 60 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Akụkụ a nwere nchekwa nke nwere igwe anaghị agba nzi, nke kwụsiri ike ma bụrụkwa nke ntụkwasị obi, can nwere ike...
Pesdị ọkụ nke Iju mmiri anyị 50W nwere ike iwepụta ihe ruru 6000lm na-egbuke egbuke. Lightlọ Lightlọ Elu mmiri a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Nke a Igwe ọkụ na-enwu ọkụ nwere eriri igwe anaghị arụ ọrụ, nke kwụsiri ike ma nwee...
Dochie Anya Nnọgharị Ighalo Anyị nke 50W nwere ike imepụta ihe dị ka 6000lm na-egbuke egbuke. Pesdị Ngwurugwu Light Light a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Ọkụ Mgbanyụ...
Ìhè Light Led 50w anyị nwere ike iwepụta ihe ruru 6000lm na-egbuke egbuke. Nke a Amazon Iju mmiri Ìhè bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Ìhè Ifufe 65 Watt . Ìhè a na-eduga...
Ọnụahịa otu: USD 32 - 33 / Piece/Pieces
Bbier ọhụrụ design 60W Led Iju Mmiri Ìhè na- enye nnukwu nchapu na dochie 175W Halogen bọlbụ. Mgbagwoju agbagọ & Cross imebi ikpo ọkụ na mma aluminum na-eme ka 12V Led Iju Mmiri na -adịgide adịgide. Okwunigwe a na- ere n'ahịa a bụ IP68 nke e...
Ọnụahịa otu: USD 24.5 - 25 / Piece/Pieces
Bbier Led Flood Light Fixtures bụ ihe niile, dịka oge a, a na-ejikwa ha na ebe obibi na nke azụmahịa dị ka mgbada, ọkụ ntụgharị ihu igwe, ebe ị na-adọba ụgbọala - n'ebe ọbụla ị chọrọ ìhè na-agbanwe agbanwe. Nke a 50W Na-ezo na Mmiri dị mma maka...
China 50 Watt ekpuchire Iju Mmiri N'èzí Ngwa
50 Watt ekpuchire Iju Mmiri N'èzí enwere ike iji ya na-adọba ụgbọala, azụ & n'ihu ụlọ. ogige, oghere, panboodu, ahịhịa, n'okporo ámá, akwarium, ulo oru, osisi, ezigbo ụlọ obibi na ọtụtụ ndị ọzọ! Site na nkwado na azụ nke Iwu Floodlighting , ị nwere ike ịbanye n'akụkụ dị iche iche iji mee ka ìhè dị na ebe ndị gbara ọchịchịrị. mgbe ahụ, mechie kposa n'akụkụ abụọ nke ihe nkwado ahụ. Anyị na - eji SMD ndị dị egwu na - enwu gbaa 5 0 Watyere ike, Lumen 5000lm, Ọpụpụ n'èzí nwere ike ime ka yad gị, ụgbọala, ọdọ mmiri, ebe egwuregwu, ụgbọala, ahịhịa dị ka ìhè dị mfe. maka Halogen Bulbs. N'elu Mmiri Iju Mmiri ndị a n'èzí nwekwara ike ịchekwa 80% nke ike gị tụnyere ọkụ ọkụ halogen.
Egwuregwu Iju Mmiri 50 Watt ekpuchire Iju Mmiri N'èzí Mmiri Iju Mmiri n'èzí Mmiri Iju Mmiri Ngwurugwu Iju Mmiri